AmaNaso Alayishwe Kakhulu - Ungadliwa
usika kanjani isibani sefennel sibe izingcezu
ukushisa kanjani uju obhakwe ham
Ngingayithenga kuphi i-alaska ebhakwe
iresiphi ye-strawberry banana smoothie yezingane
iresiphi yebhekoni isongwe intuthu encane enoshukela onsundu nebhotela
AmaNaso Alayishwe Kakhulu
AmaNachos alayishiwe ukudla okungcono kakhulu kokudla okulula! Ukwenza ama-nado abhakiwe akulula nje kuphela, alungele iphathi, isidlo sakusihlwa esilula noma isidlo sakusihlwa phakathi kwamabili!
Ama-crispy tortilla chips anenkukhu ethosiwe, ushizi, UPico de Gallo , nezinye izinto ezithandwa yi-nacho. Bhaka kuze ushizi ube bubbly futhi ungakhohlwa cwilisa zakho ozithandayo like I-Salsa eyenziwe ekhaya ukhilimu omuncu!
Ama-Nachos abhakiwe yi-appetizer yokugcina nokudla okuphelele kokwabelana! Kungenye yezinto esizithandayo uku-oda lapho siphuma futhi ngihlala ngifunisisa ukutholwa okuphelele kweNacho!
Lawa ma-pan nachos ayipuleti lokwabelana elimnandi. Imithwalo yoshizi ocibilikile, inkukhu, inyama yenkomo yomhlabathi, utamatisi, u-anyanisi nezinye izipikili ezinhle.
Ungazenza Kanjani Ama-Nachos
Ngicabanga ukuthi ingxenye enhle kakhulu ephekiwe nachos kulula kangakanani. Ukulungiselela okuncane, ukubhaka okusheshayo, futhi usukulungele ukujabulela! Ngisebenzisa inkukhu kule iresiphi ye-nachos efanelekile okusalayo. Uma unenyama ye-taco esele (inyama yenkomo), I-Crockpot Inkukhu Tacos noma ngisho okusele Inkukhu Elula Fajitas , bonke bazosebenza kahle kule recipe!
Lungiselela okokufaka - dice utamatisi no-anyanisi, nonga inkukhu, bese usika ushizi.
Hlela amachips e-nacho kusendlalelo esisodwa epanini leshidi
Faka okokufaka kwakho, bese ushunqise konke kushizi
Bhaka kuze kube yilapho ushizi uncibilikile futhi ubonakale
Kuze kube nini ukubhaka amaNachos
Uma ushizi usuncibilikile, uzokwazi ukuthi ama-nado abhakiwe aselungile. Ngithanda ukuwabhaka cishe imizuzu eyi-10, kepha kuya ngokuthi mangaki ama-toppings owangezile. Uma uthatha isinqumo sokuphinda kabili ungqimba wama-nachos abunjiwe ukudala i-nacho bake casserole, engeza isikhashana sokupheka.
Ama-chips eTortilla angasha kalula, ngakho-ke qiniseka ukuthi awupheki kakhulu. Lapho nje ziqala ukuba nsundu, kufanele uzikhiphe kuhhavini!
Ungazivuselela Kanjani AmaNachos
Uma unezinsalela (ngingamangala, ezethu zihlala zihamba ngokushesha), zigcine efrijini uze ukulungele ukuzifudumeza. Bahlele ekhasini lesikhumba elibhalwe ubhaka bese ulifudumeza kuhhavini kuze kube yilapho ushizi seluncibilikile futhi. Qiniseka ukuthi ubukela ukuze ama-tortilla chips angashisi!
Uma ungeze ulethisi epanini leshidi eliphekwe ama-nachos, lisuse ngaphambi kokuwafudumeza ukuze angabi manzi!
Slow Cooker Inkukhu Enchilada Isobho
Ama-Fish Tacos alula
I-Cheesy Dip Beese Cheese Dip
I-Pot Pot Chicken Tacos (I-Pressure Cooker)
I-Slow Cooker Inkukhu Enchiladas Recipe
AmaNachos Alayishwe Kakhulu
Isikhathi sokulungiselelaishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Sokupheka10 imizuzu Isikhathi Esiphelele25 imizuzu Izinkonzo8 izinsizakalo UmbhaliUHolly Nilsson Ama-crispy tortilla chips agcwele ubhontshisi omnyama, inkukhu enomunyu kanye noshizi omningi ocibilikile kwenza isidlo esingcono kakhulu sokwabelana! Phrinta Phina
▢1 inkukhu yebele kuphekwe kwafinyezwa
▢⅔ inkomishi usoso
▢1 isipuni isinongo se-taco
▢⅔ inkomishi ubhontshisi omnyama
▢8 ama-ounces ama-tortilla chips
▢3 izinkomishi I-shredded shredded shredded Cheddar kanye / noma iMonterey Jack
▢4 anyanisi oluhlaza lisikiwe lahlukaniswa
▢pico de gallo
▢toppings njengoba oyifunayo
Hlangisa i-ovini iye ku-375 ° F.
Hlanganisa inkukhu ekhethiwe, i-salsa kanye ne-taco seasoning epanini elincane. Engeza i-salsa ne-taco seasoning. Pheka ngokushisa okuphezulu okuphakathi kuze kube yilapho ushisa futhi iningi loketshezi oluvela ku-salsa seluhwamukile.
Beka ama-chips e-tortilla ebhodini lokubhaka. Phezulu no-½ woshizi, inkukhu, ubhontshisi, ushizi osele, nohhafu ka-anyanisi oluhlaza.
Bhaka amaminithi angu-8-10 noma kuze kube yilapho ushizi uncibilikile futhi ubonakale.
Susa kuhhavini bese ufaka i-pico de gallo kanye nama-toppings oyifunayo. Khonza ushisayo.
Okokuzikhethela okungakhethwa: iminqumo emnyama, i-jalapenos, i-cilantro, ukhilimu omuncu, utamatisi oqoshiwe, ukwatapheya,
Amakholori:369,Amakhabhohayidrethi:24g,Amaprotheni:amashumi amabilig,Amafutha:amashumi amabili nanyeg,Amafutha agcwalisiwe:9g,Cholesterol:62mg,I-Sodium:594mg,Potassium:336mg,Umucu:3g,Ushukela:1g,Uvithamini A:625IU,Uvithamini C:ezimbilimg,I-calcium:371mg,Insimbi:1.5mg
Igama elingukhiyenachos InkamboIsikhangisi KuphekiweWaseMelika, waseMexico, uTex Mex© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .